Light Iron သည်အရောင်အသွေးစုံသည့် Sam Daley အားနယူးယောက်စာရင်းသို့ကြိုဆိုသည် NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Light Iron သည်အဆင့်မြင့်အရောင်အသွေးစုံသည့် Sam Daley အားနယူးယောက်စာရင်းသို့ကြိုဆိုသည်
ဝါရင့်အရောင်အသွေးစုံသူများသည်ထုတ်လုပ်မှုလွန်ကဲသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုနယူးယောက်စျေးကွက်တွင်ဝေးကွာသောပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်ကမ္ဘာချီရောက်ရှိနိုင်သည်။
Light Iron သည် Panavision ၏ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဖန်တီးမှု ၀ န်ဆောင်မှုဌာနခွဲ ဖြစ်၍ အရောင်အသွေးစုံသော Sam Daley အားတီထွင်မှုစွမ်းရည်ကို ဦး ဆောင်နေသူဖြစ်သည်။ Daley သည်အသင်းအားအကြီးတန်းအရောင်အသွေးစုံသောအသင်း ၀ င်အဖြစ် ၀ င်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကို feature နှင့် episodic ပရောဂျက်နှစ်ခုလုံးအတွက်နယူးယောက်စက်ရုံမှအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
"Light Iron မိသားစုကို Sam ကိုကြိုဆိုဖို့ကျွန်တော်တို့ ၀ မ်းသာပါတယ်" ဟု Light Iron တွဲဖက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Seth Hallen ကပြောကြားသည်။ "သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်လျှောက်လုံးဆမ်အထူးသဖြင့်နယူးယောက်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းန်းကျင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဆမ်၏အနုပညာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုသည်သူ၏ထူးခြားသောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ဇာတ်လမ်းတွဲများတွင်ထင်ရှားသည်။ သူ၏ခရက်ဒစ်များသည်အဘယ်သူအားမျှဒုတိယနေရာတွင်ရှိနေပြီး Light Iron သည်လူသိများသောအလုပ်၏စွမ်းရည်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဆမ်၏ရောက်ရှိမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နယူးယောက်စျေးကွက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးဖောက်သည်များကိုလက်လှမ်းမီသောနေရာတိုင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားထောက်ပံ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိသစ္စာကိုထင်ဟပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးချဲ့စာရင်းတွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးပိုမိုကြေငြာရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Daley သည်နယူးယောက်မြို့ရှိထုတ်လုပ်မှု post-production အသိုင်းအဝိုင်းတွင်နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိပြီးကုမ္ပဏီမှ Light Iron သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ DuArt တွင်နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများအစပြုပြီးသူသည် Technicolor သို့မဝင်ခင် Tape House နှင့် PostWorks တွင်သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာသူကထိုအချိန်ကအကြီးမားဆုံးနယူးယောက်ထုတ်လုပ်မှုအချို့ကိုနေ့စဉ်သတင်းစာများကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သူသည်နေ့စဉ်သတင်းစာအရောင်အသွေးစုံသူနှင့်လက်တွဲခဲ့သည့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများ၏အားပေးမှုကြောင့်နောက်ဆုံးအရောင်သို့ကူးပြောင်းခဲ့သည်။
Daley ၏အစောပိုင်းပြီးဆုံးခရက်ဒစ်များတွင် HBO miniseries ပါဝင်သည် မေးဒပီယပ် နှင့်ကောင်းချီး Indie အင်္ဂါရပ် မာသမာစီမေမေမာလင်း။ သူ၏ရုပ်မြင်သံကြားခရက်ဒစ်များတွင်စီးရီးများပါဝင်သည် ခခြှေဲ, မိန်းကလေးများ, အဆိုပါ Deuce, အပြစ် နှင့် အောင်မြင်သောနှင့် miniseries ငါသည်ဤအများကြီးမှန်ကန်သည်ကိုငါသိ၏ နှင့် ငါ့ကိုတစ်သူရဲကောင်းပြရန်သူသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်သူ့ကို HPA ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည် အဆိုပါဖလော်ရီဒါစီမံကိန်း, မင်းကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလို့တောင်းပန်ပါတယ် နှင့် အိမ်နီးချင်းအတွက်လှပသောနေ့.
"The Light Iron team ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိပြီးရှေ့ဆက်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ ဒါကငါလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲ" ဟုဒယ်လီကပြောသည်။ “ ဒါရိုက်တာများနှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများကိုပန်းဝင်မျဉ်းကိုဖြတ်ကျော်ရန်ကူညီခြင်းကကျွန်ုပ်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ။ သူတို့ဖြုန်းတီးသောလုပ်အားနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့မှောက်မျက်နှာပြင်ပေါ်၌အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ယာဉ်၏အကျိုးအရှိဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။ ”
“ Panavision မိသားစုတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကြီးမားသောဆုကြေးဖြစ်သည်။ “ စက်မှုလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံးအလုပ်ကကင်မရာငှားရမ်းတဲ့ဌာနမှာရုပ်ရှင်ကျောင်းမှာအလုပ်လေ့လာခဲ့တယ်။ ဒီအတွေ့အကြုံကကျွန်တော့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအစောပိုင်းကဓာတ်ခွဲခန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တုန်းကရုပ်ရှင်ပညာရှင်တွေနဲ့ပိုပြီးဆက်သွယ်ပြောဆိုခွင့်ရခဲ့တယ်။ အခုတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုကင်မရာပြင်ဆင်မှုမှာစတင်နိူင်ပြီ!”
Light Iron ၏အနုပညာရှင်များသည်ပူးပေါင်းပါ ၀ င်သည့်၊ ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများ၊ အထူးသဖြင့်ရုပ်ရှင်၊ Daley သည်နယူးယောက်ရှိအကြီးတန်းအရောင်အသွေးစုံသော Sean Dunckley နှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများနှင့်အဝေးမှအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းနှင့်အတူအခြေစိုက်လိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီ၏ bicoastal နောက်ဆုံးအရောင်များစာရင်းတွင် Ian Vertovec၊ Jeremy Sawyer၊ Scott Klein, Corinne Bogdanowicz, Nick Hasson, Ethan Schwartz နှင့် Katie Jordan တို့ပါဝင်သည်။ ဤအနုပညာရှင်များသည်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများနှင့်မိတ်ဖက်လုပ်ပြီး၊ ရိုက်ကူးရေးဆရာများသည်အဓိကဓာတ်ပုံရိုက်ရန်သူတို့၏ပုံပန်းသဏ္craftာန်ကိုဖန်တီးရန်နှင့်ဖမ်းယူခြင်းမှအဆုံးအထိယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်များကိုကူညီပေးသည်။
Light Iron ၏နယူးယောက်၊ Los Angeles မြို့ အဆောက်အ ဦး များ၊ တစ်ခုချင်းစီသည်ဖန်တီးမှုအပြီးသတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်သောကုမ္ပဏီများသည်နေ့စဉ်သတင်းစာ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဝေးလံခေါင်သီသောအစည်းအဝေးများကိုကမ်းလှမ်းသည့်အတ္တလန်တာ၊ အယ်လ်ဘူကရက်၊ ချီကာဂို၊ နယူးအော်လင်း၊ တိုရွန်တိုနှင့်ဗန်ကူးဗားတို့တွင်နေရာများရှိသည်။ Light Iron ၏မတူနိုင်သည့်အဝေးထိန်းစွမ်းဆောင်ရည်များ - နေ့စဉ်သတင်းစာများအတွက်အဖြေများ၊ အော့ဖ်လိုင်းအယ်ဒီတာငှားရမ်းခြင်းနှင့်အရောင်နှင့်အပြီးသတ်ခြင်းအပါအဝင် - မည်သည့်နေရာ၌မဆိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အလုပ်လုပ်သောရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများအတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်းရန်တံခါးဖွင့်ပေးသည်။
"Light Iron ရဲ့ရှေ့ပြေးဖိုင် -based လုပ်ငန်းအသွားအလာ၏သမိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားစွမ်းရည်များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ချ။ ," Hallen ကဆိုသည် “ လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည်ကူးစက်ရောဂါကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများ၊ အယ်ဒီတာ့အာဘော်နှင့်အပြီးသတ်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝေးလံသောဖြေရှင်းနည်းများသည်အမှန်တကယ်ဂိမ်းပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ တစ်နေရာတည်းတွင်ဗဟိုပြုရန်လိုသည်ထက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်တစ်ပြိုင်တည်းတွင် Light Iron ရုံးများနှင့် ၄ င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ရုံးများနှင့်နေအိမ်များတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတွေဘယ်နေရာမှာပဲလုပ်လုပ်၊ ငါတို့စက်ရုံတွေမှာရှိတဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်တယ်။ ”
အလင်းကိုသံPanavision ကုမ္ပဏီသည်နည်းပညာဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်နှင့်အနုပညာမိတ်ဖက်များအနေနှင့်အဆုံးမှအဆုံးသို့ထုတ်လုပ်မှုနှင့် post ဖြေရှင်းချက်များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများ၊ စတူဒီယိုများ၊ တီထွင်ဖန်တီးသူများနှင့်နည်းပညာပညာရှင်များသည် Light Iron ၏ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မှီခိုပြီးတိုးတက်သောဒီဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းအသွားအလာများ၊ နေ့စဉ်သတင်းစာများနှင့်အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုမှသည်နောက်ဆုံးအရောင်နှင့်မီဒီယာမော်ကွန်းတိုက် ၀ န်ဆောင်မှုများအထိမှီခိုနေရသည်။ မြောက်အမေရိကတလွှားအော့ဖ်လိုင်းငှားရမ်းနေရာနှင့်အဆောက်အအုံများသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်လှမ်းမီမှုဖြင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သဖြင့် Light Iron သည်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်နှင့်ဇာတ်လမ်းတွဲစီမံကိန်းများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းကိုအထူးပြုသည်။ ကုမ္ပဏီအပေါ်လိုက်နာပါ Facebook က, တွစ်တာ, Instagram ကို, Vimeoဒါမှမဟုတ် LinkedIn တို့.
ယခင်: SMPTE Hollywood သည် TikTok ကိုမတ်လ Virtual အစည်းအဝေးတွင်ကိုင်တွယ်သည်
နောက်တစ်ခု: AP / အငယ်တန်းထုတ်လုပ်သူ